Gerard Lopez Madaxweynaha Lille Ayaa Gabriel Magalhaes Ku Tilmaamay Mishiin Dhamaystiran? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Madaxweynaha Lille Gerard Lopez ayaa ku tilmaamay Gabriel Magalhaes “Mishiin dhameystiran” madaama daafaca uu soo jiitay indhaha kooxda Everton.
Gabriel, oo 22 jir ah, ayaa u safay Lille si uu bartilmaamed ugu noqdo Everton iyo kooxaha kale ee Premier League ee Arsenal iyo Chelsea.
Lopez ayaa xaqiijiyay in reer Brazil uu doonayey inuu u dhaqaaqo daafacan isla markaana ay jireen dalabyo dhowr ah oo u yimid daafaca.
“Waa run inuu jeclaan lahaa inuu baxo oo uu wax kale tijaabiyo. Weli go’aankaas ma aanan qaadin, laakiin wuxuu helay dalabyo dhowr ah, Waxaan dareemayaa inuu ku dhow yahay hal koox marka loo fiiriyo kuwa kale, laakiin waxba ma aysan gaarin weli waan arki doonaa” ayuu u sheegay Sky Sports.
“Ma jecli inaan wax intaa ka badan iraahdo madaama aan ixtiraamayo ciyaaryahanka. Qaabka aan u leeyahay meesha, oo aan aragnay inay sifiican ula shaqeeyaan Nico [Nicolas Pepe], ayaa ah inaan qiime gaar ah ku leeyahay maskaxda Ciyaaryahan, iyo dhamaadka maalinta waa dooqa ciyaartoygu inuu aado oo ka ciyaaro halka uu doonayo inuu ka ciyaaro Taasi waa ixtiraamka aan u hayo iyaga. ”
Gabriel ayaa u saftay Lille 24 kulan xilli ciyaareedkan ka hor inta aan loo joojin ololaha sababo la xiriira faafitaanka coronavirus, waxaana Lopez rumeysan yahay in Gabriel uu ka mid yahay difaacyada ugu caansan Yurub, isagoo ku taageeraya inuu ugu dambeyn u ciyaaro Brazil.
“Waxaan dareemayaa inuu ka mid yahay shanta daafac dhexe ee ugu waa weyn Yurub haatan. Tirakoobkiisa, oo aan si fiican uga jirin meel ka baxsan dalka France, wuxuu muujinayaa in boqolkiiba inta uu ku guuleysto labada lamaane uu yahay mid aan hore looga maqneyn horyaal aad iyo aad u weyn,” ayaa yidhi.
“Waa mashiin dhameystiran, aniga ahaan, jidkiisa ayuu ku socdaa hadii uusan aheyn sanadkaan runti waa koox weyn Waan hubaa inuu u socdo xulkiisa Brazil waqti uun.
“Waxaa lala xiriiriyay labo naadi oo ka dhisan Boqortooyada Ingiriiska, waxaana si cad loola xiriirinayaa kooxo kale oo iyagana wax ka weydiyay ama horay ugu soo gudbiyay dalabyo uu u gudbiyay, laakiin dhaqso kuma nihin, mana ku ciyaareyno haatan garoonka ku jir.